50 Fanadihadiana mahazatra indrindra Fanontaniana azonao atrehina amin'ny Interviews | NY
50 Fanontaniana Fametraham-panainana Kokoa
Raha mikasika ny fizotry ny resadresaka, ny fikarohana sy ny fandaharana ho an'ny tafatafa dia afaka mamaritra ny fepetra azonao amin'ny fanatanterahana ity manaraka ity. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanomanana ny fihaonana amin'ny mpandray anjara dia ny hampiroborobo ny fanehoan-kevitr'ireo fanontaniana fanadihadiana rehetra - na dia ny tena tsy mahazatra aza.
Mba hanampiana anao hanomboka, NY filtered through a huge number of interview surveys to discover the absolute most regular interview questions applicants get asked amid late interviews. In this way, on the off chance that you have a prospective employee meet-up arranged, hone before a mirror or ask a companion or relative to tune in to your responses to the accompanying questions so you’ll be prepared to put your best foot forward.
Inona avy ireo toetrao?
Inona ireo fahadisoanao?
Marina ve raha milaza ianao fa handeha?
Nahoana ianao no te hiresaka amin'ny [anaran'ny fikambanana eo an-toerana] eto?
Nahoana ianao no te hiala ny fikambanana misy anao?
Fa maninona no misy tsikombakomba amin'ny asanao eo amin'ny daty [daty] ary [daty asio]?
Inona no azonao atolotra anay fa tsy misy olona hafa?
Aiza no ahitanao ny tenanao mandritra ny dimy taona? Folo taona?
Inona ireo zavatra telo tian'ny tale teo aloha tadiavinao hanatsara anao?
Marina ve fa hifindra ianao?
Ampianaro ahy ny vanim-potoana nataonao diso.
Inona ny asa fanontanianao?
Ampahafantaro ahy ny momba ny zava-bita iray tianao indrindra.
Inona no tena mampikorontana ny namanao?
Inona no mety hanantenanao hamaranana amin'ny andro 30 voalohany / 60 andro / 90 miasa any am-piasana?
Resaho ny momba anao.
Miresaha momba ny fototra fanabeazana anao.
Soraty ny tenanao.
Ampahafantaro ahy ny fomba nikarakaranao ny toe-javatra mahakivy.
Nahoana no hevitra tsara ho antsika ny fifanarahana aminao?
Ahoana no ahafahanao mahazo rivotra amin'ity toerana ity?
Hanao asa / faran'ny herinandro ve ianao?
Inona ny fahasalamanao?
Nahoana ianao no mitady asa hafa?
Manome fe-potoana iray ianao rehefa nandeha lavitra noho ny fepetra takian'ny fisamborana.
Inona no mety ho lazain'ny tatitra mivantana aminao momba anao?
Inona no mamakivaky anao?
Iza ireo mpifanandrina aminay?
Inona no fahadisoanao lehibe indrindra?
Inona ny anaran'ny CEO?
Inona no tanjon'ireo mpilatsaka hofidiana?
Ahoana no hiatrehanao lanja?
Inona no manjo anao amin'ny maraina?
Azo antoka ve ny milaza fa mpisava lalana ianao na mpanohana?
Amin'izao fotoana izao aho no niantso ny mpanara-maso anao ary nanontany azy hoe inona no faritra azonao ampitomboina, inona no mety ho lazainy?
Inona no tranonkala tianao indrindra?
Inona no mahatonga anao tsy sahy hiteny?
Inona avy ireo fialam-boly ataonao?
Inona avy ireo fahefana anananao?
Ahoana no ahafahanao mandoro olona?
Hiasa 40 + ora fito andro ve ianao?
Ahoana no ahafahanao mitantana ny mpanjifa tezitra na tezitra?
Inona no tianao indrindra ary ny kely indrindra amin'ny miasa ao amin'ity orinasa ity?
Inona no fanontanianao amiko?
Ireo fanontaniana ireo dia matetika ametrahana mandritra ny resadresaka momba an'i Joba, fanontaniana maro tsy ampoizina sy mahitsy hafa mety hangatahana koa.
PMP Certified Professional Fanadihadiana Fanontaniana